Inona no atao sy dikany izay ananan'ny ra ao amin'ny fivorian'ny alika | Tontolo alika
Raha manomboka mahatsikaritra isika fa misy zavatra tsy mety amin'ny alikanay, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia zahao ny siligaoma sao misy hatsatra. Ny fisian'ny fivalanana, ny fandoavana na ny tsy fiasan'ny biby fiompintsika toy ny mahazatra dia soritr'aretina hafa afaka manaitra antsika fa misy zavatra mitranga.
Rehefa mahita isika ra ao amin'ny fatin'alika anay Mety ho toe-javatra manaitra tokoa izy io, ary koa zavatra mety hanahirana antsika betsaka. Na izany aza, ny antony mahatonga ny fisehoan-dra ao amin'ny fivorian'ny alikantsika dia matetika tsy tena matotra, satria matetika ny antony dia mety miovaova be, indraindray dia mety ho olana madinidinika toy ny fiovana amin'ny sakafo na amin'ny tranga mihoapampana kokoa aretina lehibe toy ny homamiadana Parvo.
1 Inona no hatao raha misy rà ny alikantsika?
2 Fitsaboana ra ao amin'ny fivorian'ny alika misy antsika
Inona no hatao raha misy rà ny alikantsika?
Na izany aza, amin'ny fiheverana ireo tranga ireo dia tsara kokoa ny mitondra ny biby fiompintsika amin'ny consultation amin'ny veterinera mba hahafahantsika manilika antony lehibe kokoa ary hahazoana antoka fa manao izay ilaina izahay mba hitazomana ny fahasalamana alikan'ny alika.
Misy fomba roa ahafahantsika milaza amintsika ny anton'ny fisian'ny rà ao amin'ny fivalanan-tsofina, ity zavaboary ity hematochezia sy melenaAmin'ireo tranga roa ireo dia azo avahana amin'ny lokon'ny rà izy ireo.
Ao amin'ny hematochezia, ny rà izay mivoaka ao amin'ny fivorian'ny can dia vaovao ary manana loko mena mamirapiratra tokoa. Amin'ity tranga ity ny ra izay miseho dia tsy mbola levona ary avy amin'ny rafi-pandevonan-kanina ambany, matetika dia avy amin'ny tsinaibe na ny lava.
Raha ny karazana mana no tena tsy hitovizany amin'ilay teo aloha, satria ny ra izay miseho eo akaikin'ny tazo dia levona ary izy io koa dia manana loko somary mainty arahin'ny fofona mahery be, ny fijeriny dia mitovy amin'ny tar ary ary ny rà mandevina dia avy amin'ny tapany ambony amin'ny rafi-pandevonan-kanina. Sarotra kokoa ny manavaka io endrika io noho ny hematochezia satria somary maizina ny dikin'alika ary noho izany antony izany dia sarotra kokoa ny milaza raha ra na tsia.
Fitsaboana ra ao amin'ny fivorian'ny alika misy antsika
Raha sendra tsikaritray fa tsy salama ny alikantsika ary misy rà koa ao amin'ny fipetrany dia midika izany tonga ny fotoana hitsidihana ny vet, noho izany ny zavatra tsara indrindra dia ny maka santionany amin'ny seza hanaovana fanadihadiana ary noho izany dia roahina ny katsentsitra.
Rehefa misy rà ao anaty fitoerany ny biby fiompinay, ny fitsaboana anao dia mety tsy mitovy arakaraka ny antony izany no mahatonga an'io rà mandriaka io. Ny mpitsabo dia afaka manao fitsapana sasany ao anatin'izany ny seza, urina sy ny fandalinana ny ra, ny ultrasound amin'ny kibo, ny mombamomba ny coagulation ary na ny endoscopy aza.
Noho io antony io dia tena zava-dehibe ny hitondrantsika ny alikanay any amin'ny mpitsabo biby amin'ny fomba toy izao afaka manana Diagnostika sahaza kokoa isika momba io olana mahazo ny alikantsika io. Zava-dehibe ihany koa ny tsy famoahana tena amin'ny alika satria mety hanimba ny fahasalamany izany ary mety hiteraka olana lehibe kokoa isika.
Rehefa eo amin'ny mpitsabo biby isika dia azo inoana fa hanome antsika orientation tsara kokoa mankany a sakafo malefaka miaraka amina fotom-bary fotsy sy akoho. Mandritra izany fotoana izany dia nanoro hevitra ny amin'ny fomba tokony hitondrantsika ny soritr'aretin'ny alikantsika izy ary raha ilaina dia holazainy amintsika raha tokony hanome fanafody azy isika.
Na izany aza, olana lehibe kokoa toa ny parvo na homamiadana Tokony hojerentsika mialoha izany mba hahafahantsika mitsabo azy haingana araka izay tratra, mba hahafahan'ny alikantsika sitrana tanteraka.
Noho io antony io dia zava-dehibe ny andehananay haingana any amin'ny mpitsabo biby mba hahamety kokoa ny fizotrantsika ny alikanay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Inona no hatao ary inona no ananan'ny rà ao amin'ny fitoeran'alika antsika?
Manaikitra ny felam-bolo, ny fomba hahalala sy hiadiana amin'izy ireo